Nagarik News - दीपक दाहाल
इमर्जेन्सीमै डाक्टर छैन
काठमाडौं- वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा शनिबार राति आलसतालस अवस्थामा ल्याइएका दुई बिरामीले उपचारै पाएनन्। विष सेवन गरेका दुईमध्ये एकलाई त अस्पतालले आकस्मिक कक्षको ढोकाबाटै फिर्ता पठाइदियो। गम्भीर प्रकृतिका अन्य दर्जनौं बिरामीसमेत वीरले भर्ना लिन नमानेपछि रातारात रुवाबासी गर्दै अन्य अस्पताल धाउनुपर्योा।
कारण– डाक्टर अभाव।
वरिष्ठले काम नगर्दा समस्या
आकस्मिक कक्ष नै डाक्टरविहीन हुनुमा चिकित्सकको अभाव मात्र कारण होइन, मेडिकल अधिकृतका रूपमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले पदअनुसार काम नगर्दा पनि समस्या आएको हो।
अस्पतालमा ६८ मेडिकल अधिकृतको पदमा विशेषज्ञ डाक्टर कार्यरत छन्। वर्षौंदेखि विविध कारणले बढुवा हुन नपाएका उनीहरू पदीय आधारमा मेडिकल अधिकृत नै हुन्। त्यस्ता विशेषज्ञ डाक्टर सामान्य 'राउन्ड' मा गए पनि पदअनुसार काम गर्दैनन्। आकस्मिक कक्षमा पनि विशेषज्ञ डिग्री पाएका मेडिकल अधिकृत नभएका होइनन्, तर उनीहरू राति ड्युटी बस्दैनन्।
वीरका निर्देशक डा. बुलन्द थापा विशेषज्ञलाई मेडिकल अधिकृतको काम लगाउन व्यवहारिक कठिनाइ भएको बताउँछन्। 'सम्मान गर्नुपर्ने विशेषज्ञ डाक्टरलाई कसरी फ्लोरको ड्युटीमा गएर बस भन्नु?' उनले भने।
वरिष्ठ चिकित्सकहरू रात्रिकालीन र अन्य विभागको ड्युटीमा नबसेपछि यही रोग रजिस्ट्रार र रेजिडेन्टलाई समेत सरेको छ। आकस्मिक विभागमा समेत रेजिडेन्टहरू 'अनकल' (बोलएपछि मात्र आउने) सेवा मात्रै दिन्छन्। उनीहरू आफ्नो विभागसँग सम्बन्धित बिरामी आएको अवस्थामा मात्रै आउँछन्। 'रजिस्ट्रार चिकित्सकमा पनि भत्ता मात्र खाने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ,' आकस्मिक विभागका पूर्वप्रमुख डा. डिपी सिंहले भने, 'निजीमा गए जे काम पनि गर्छन्, तर वीरमा कोही ड्युटीमा बस्दैन्।'
डाक्टर अभावकै कारण राजधानीबाहिरबाट वरिष्ठ चिकित्सकले रेफर गरी पठाएका बिरामीले पनि वीरमा स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल अधिकृत, रेजिडेन्ट हुँदै बल्ल वरिष्ठ चिकित्सकसम्म पुग्ने अवसर पाउँछन्।
काठमाडौं- नेपालमै उत्पादित सामान्य औषधिको प्रयोगबाट नवजात शिशुको मृत्यु जोखिमलाई २३ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको भन्दै नेपाललाई अमेरिकी विकास नियोग (युएसएड) ले सम्मानित गरेको छ। करिब एक दशकदेखि विभिन्न जिल्ला र स्वास्थ्य संस्थामा गरिएका परीक्षणबाट नवजात मृत्युदरको जोखिम घटाउन सफल सावित भएपछि नियोगले ‘नवसिर्जन पुरस्कार' सहित सम्मान गरेको हो।
ओलीको ६३औं जन्मदिन अस्पतालको शैयामा
काठमाडौं- एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आइतबार आफ्नो ६३ औं जन्मदिन अस्पतालमा मनाए। भेट्न आउनेहरूले ल्याइदिएको लड्डु र फलफूल बाँडेर शुभकामना आदानप्रदान गरे। हात सुन्निएर युरिक एसिडको शंकामा शुक्रबार धापासीस्थित ग्रा्यन्डी अस्पताल भर्ना हुँदा एमाले सरकारमा जाने कि नजाने विवादले राजनीतिक माहोल तातेको थियो। त्यही सेरोफेरोमा आइतबार अस्पतालको बेडबाटै उनले कांग्रेस–एमाले नेताहरूसँग महत्वपूर्ण भेटघाट गरे।